सेयर के हो ? कसरी गर्ने लगानी ? « Gurash Online
सेयर के हो ? कसरी गर्ने लगानी ?
७,भदौ| कम्पनीको पुँजी वा स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरी लगानीकर्ताहरुलाई विक्रि गरिने पुँजीको एउटा हिस्सा वा इकाइको दस्तावेजलाई ‘सेयर’ भनिन्छ । कुनै पनि ठुला कम्पनीको लागि पुँजी जम्मा गर्न सेयर जारी गरिन्छ । सेयर पुँजीको अदृश्य इकाइ हो, जसमा कम्पनी तथा सेयरधनीबीच करार हुने गर्दछ । सेयरमा लगानी गरेबापत सेयरधनीहरुले प्रत्येक वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछन् । कुनै पनि कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट नाफा वा घाटा हुन्छ । आफुले गरेको लगानीको अनुपातमा उक्त घाटा वा नाफा दुबैको हिस्सेदार हुन मञ्जुर भई गरिएको लगानीको अंश नै ‘सेयर’ हो ।
संस्थापकहरुले संस्थापक सेयर हालिसकेपछि कम्पनी चलाउन लगानी जुट्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि मात्र साधारण सेयर जारी गरिन्छ । साधारण सेयर तपाईँ हामी सर्वसाधारण जनताबाट उठाईएको सेयर हो । सामान्यतया १ कित्ता शेयरको मुल्य रु। १०० हुन्छ । सामान्यतया सर्बसाधारणलाई ५० कित्तादेखि माथि सेयर हाल्ने अवसर दिईन्छ । कम्पनी विघटन गर्दा अन्तिममा नाफा र घाटा सबै लिने सेयर साधारण सेयर हो ।
फारम भर्नेको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मागेको भन्दा कम सेयर परेमा वा शेयर नपरेमा त्यही खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने गरी विक्री प्रबन्धकले एकाउण्टपेयी ९खातामै रकम जाने० चेक जारी गरिदिन्छ । फारम भर्न जाँदा आफ्नो पासपोर्ट साइजको दुईप्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आवेदन गरेको सेयरको बाँडफाँट निष्काशित सेयरको आधारमा ४० देखि ७० दिन लाग्छ । सेयर बाँडफाँट भएपछि लगानीकर्ताले कति सेयर पाए भन्ने यकिन हुन्छ । पाएको सेयरको प्रमाणपत्र र माग गरेर पनि नपाएको सेयरको रकम फिर्ता पाउन सकिन्छ । माग गरेर पनि भनेजति सेयर नपाएकाहरुले त्यो रकम बापतको ब्याज पनि पाउँछन् ।
सेयर बाँडफाँट गरेको ३० दिनभित्र कम्पनीले आफ्नो सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० मा सेयर सूचीकरण गराउँछन् । त्यसपछि लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि कम्पनीको पहिलो पटकको काराबोरका लागि नेप्सेले कम्पनीको नेटवर्थको ३ गुणासम्म रकम तोकिदिन्छ । त्यसपछिको मूल्य भने बजारमा रहेको माग र आपूर्ति अनुसार नै निर्धारण हुँदै जानेछ ।